बाल्यावस्था र राज्यारोहण | मझेरी डट कम
...राजा पृथ्वी मृत्युशय्यामा छन् । आज १० दिनदेखि दानकर्म चलिरहेछ । काठमाडौँ सहरका गरिबगुरुवा हात्तीसारमा भेला हुन्छन् र जयसाथ भीख थाप्छन् ।
डिसेम्बर ११ का दिन ठीक ४ बजे पहिलो बाघको सिकारको फोटो उतारिन्छ । ...
... डिसेम्बर ११ का दिन ठीक ४ बजे राजा पृथ्वीको स्वर्गारोहण हुन्छ । ...
... ठीक चार दिनअघि डिसेम्बर ७ का दिन युवराज त्रिभुवन एउटा अनौठो घटना देख्छन् । युवराज सिद्धार्थले पाएको अनुभवभन्दा कम अनुभव हुँदैन उनलाई ।
एक्कासि न्हुछेमाया भन्छे, "मेरा दाजु त छैन, सरकार !"
"यतिका मानिसलाई छाडेर पनि मेरो दाजुलाई छाडेनन् । सरकारबाट हुकुम हुनुपर्यो ।" न्हुछेमाया गुनासो पोख्छे, उसका आँखाबाट आँसु भल्ल फुट्छ । कोही कसैका निमित्त कति माया गर्न सक्दो रहेछ । राजा मुख्त्यारलाई भनिदिन हुकुम दिन्छन् ।
युवराज छक्क पर्छन् ।...
त्यस दिन । जेलको हाकिम, पाले र एक अन्य व्यक्ति आएको देख्नासाथ उसको सातो जान्छ । पिँजडाको ढोका खोलिन्छ र उसलाई बाहिर आउने आदेश मिल्छ । ऊ ठाडै भनिदिन्छ, "नाइँ, मारे यहीँ मार, म बाहिर जान्नँ ।"
जहाँ मरे पनि मर्नु नै हो ...। न्हुछेमाया दाजुलाई देखेर दंग पर्छे । दौडेर गई महाराजाको पाउमा शिर राख्छे र खुसीका आँसुले उनको पयर पखालिदिन्छे । उनी बालिकाको ललाटमा हात राखिदिन्छन् । युवराज त्रिभुवन हेररिहेछन् । बुझिरहेछन् । ...
... ... नेल-हतकडी काटिन्छ । त्यसैगरी जसरी १०१ जनाको काटिएको थियो । तर, यसको छ्याङछ्याङमा एउटा संगीतात्मक ध्वनि छ ।
... न्हुछेमायाका लागि ।
... राजा पृथ्वीका लागि ।
... युवराज त्रिभुवनका लागि । ...
... ... नेल-हतकडी काटे पनि भीम उठ्न सक्दैन । हातगोडा कुँजा (लठेब्रा) भइसके । उसले उभ्भिन बिर्सिसक्यो । नेल-हतकडी कटे पनि ऊ उभ्भिन सक्दैन । ऊ भाग्न चाहन्छ तर खै शक्ति ?
उसको घरबाट मानिस आउँछन्, अचम्भित भई । बोकेर लैजान्छन् । ऊ एक वर्षभित्रै मर्छ । ...
... यसको एक सय घन्टाभित्र उनी नेपालका राजा बन्छन् ।
डिसेम्बर ११, १९११ को अपराह्नको ४ बजेको छ । हात्तीसारमा गरिबगुरुवाको ताँती लागेको छ । यस्तैमा आउँछन्, मुख्त्यार भीम र आदेश दिन्छन्, 'दान अब बन्द गरििदनू' र उनी लाग्छन् नारायणहिटीतिर ।
"लौ बिराम भयो ! नारायण ! नारायण !!" स्वर सुनिन्छ अनि पूरा नारायणहिटीका नरनारीको सम्मिलित झन्डै एक हजार कन्ठ स्वरको रुदन ।
साढे पाँच वर्षको उमेरमा त्रिभुवन अब श्री ५ महाराजाधिराज भए । राणा शासनको चरमोत्कर्ष काल अब प्रारम्भ हुन्छ ... ।
... राजालाई कसैको जुठो लाग्दैन भन्ने कुरा उठ्छ । मानिसहरू ३० वर्षअघि राजा पृथ्वीको पालाका कुरा सम्झन्छन् । बाजेको स्वर्गवासमा पृथ्वी गद्दीमा आएकाले पनि जुठो नलागेको भन्ने कुरा पनि उठ्यो ।
सन् १८४६ मा आरम्भ भएको राणा शासन सन् १९११ मा पुगेको थियो । यस ६५ वर्षको अवधिमा भएको संघर्ष राणाहरूले बिर्सेका थिएनन् । उनीहरूले बुझेका थिए, यही हो मौका सन्तान दर सन्तानका लागि बाटो सफा पारििदने । चन्द्रशमशेरको उमेर त्यसबेला ४८ वर्षको थियो । उनी स्वर्गवासी महाराजाधिराजको मामा पर्थे र त्यही सम्बोधन पाउँथे । सबभन्दा पहिलो काम उनले धिराजबाट अब 'महाराज बुबा' भन्न लगाए ।
'महाराज बुबा !
यहाँ हामीलाई सन्चै छ । त्यहाँ सन्चो भए बेस होला । ...'
'सरकारबाट पठाइबक्सेको शिक्षाप्रद फरमान पाई शिर चढायाँ .. ।'
यता संस्कृतको अध्ययन आरम्भ भइसकेको थियो । शिक्षकले हितोपदेश आरम्भ गर्ने अनुमति मागे । माइला गुरुज्यूबाट प्रतिबन्ध लाग्यो, कारण हितोपदेशमा राजनीति घुमेको छ, त्यसको ज्ञान व्यर्थमा किन दिने ? चण्डी पढाउने राय आयो, त्यसका बदलामा । एकैचोटि चण्डी आरम्भ गरििदँदा शिक्षार्थीको उत्साह समाप्त भयो ... ।
अन्त्यमा, मोहनशमशेरका गुरु वाराणसी घोष झिकाइन्छन् । उनै पढाउन थाल्छन् अंग्रेजी पनि संस्कृत पनि । बंगाली पाराले त्रिभुवनको शिक्षा आरम्भ हुन्छ 'जलम-पानी'बाट । अंग्रेजी पढाउन् 'फर्स्ट बुक' आउँछ । नेपालको राजनीतिको स्वाद चाखिसकेका घोषबाबु हितोपदेश प्रारम्भ गर्छन् ।
उल्था गर्न अझ सिकाएको थिएन । हिसाब गर्न अंक बाँकी नै थियो । राजनीतिको त कुरै भएन, भूगोल, इतिहास पनि टाढै थिए र सिकाइने नसिकाइने कुराको निर्णय पनि गर्ने बेला भएको थिएन । तर, विद्यार्थीको उत्सुकतालाई कसले मार्न सक्छ ? एक दिन घोषबाबु छक्क परी हेर्छन् रडिरको 'मार्जिनल लाइन'मा 'गो टू बेड'कै पंक्तिमा शय्यायां सस्व लेखिराखेको ।
कस्तो सून्दर पृथ्वी हाम्रो
प्वाक्क मुखा हान्नु जस्तो